About Us - Dongguan Tuoyuan nemazvo Machinery Co. LTD
Imba > Nezvedu >
Dongguan Tuoyuan nemazvo Machinery Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2016 uye yapfuura ISO9001 yepamusoro utariri hurongwa advertising. Kubvira muna 2016, yave kuita mumwe-vanorega kugadzira mabasa (furemu nomoto, jira simbi kugadzira, spraying uye CNC kugadzira).
Iyo kambani inovhara nzvimbo inosvika zviuru zvitanhatu zvemamirimita, iine guta rakanyoreswa remamiriyoni gumi emamiriyoni uye huwandu hwevashandi makumi matanhatu. Musangano wekutanga uri muNha. 101, Taixin Road East, Xinguyong Nharaunda, Wanjiang Dunhu, Dongguan Guta. Inonyanya kuita mukugadzirisa uye kuungana kwezvakanaka zvikamu zveasina-mwero michina yekushandisa, pamwe nekugadzirwa uye kugadzirwa kweyekucheresa chinomisa.
Musangano wechipiri uri muXiaohe Village, Daojiao Town, Dongguan City. Inonyanya kugadzirisa mubhedha we laser yekucheka muchina, yepasi ndiro yemidziyo hombe, ndiro yakajeka, ndiro yemadziro uye furemu, inofinha, yekugaya nekukuya, nezvimwewo Kune vashandi makumi mashanu nevashanu vekugadzira, mamaneja matanhatu, mainjiniya mashanu uye 4 vhenekeri emhando yepamusoro.
Iyo hombe michina ndeye CNC machining centre: CNC kutendeuka, kutendeuka, kugaya, kukuya, etc.Makuru CNC gantry azvikuya, gantry kukuya, CNC inofinha muchina.